Wordpress - Ad-minister ဖြင့်ကြော်ငြာများကိုစီမံပါ Martech Zone
WordPress - ကြော်ငြာ ၀ န်ကြီးနှင့်ကြော်ငြာများကိုစီမံပါ
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိကြော်ငြာအချို့ကိုစမ်းသပ်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်အဓိကဒီဇိုင်းပညာရှင်ထံချဉ်းကပ်ပြီးအဓိကကျသောကုဒ်များကိုတည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အားအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေသောအရာတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်၏ WordPress ဘလော့ဂ်အတွက်ကြော်ငြာပလပ်အင်အတော်များများကိုစမ်းသပ်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမျှလုံလောက်စွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
ဒီတစ်ပတ်မှာ Ad-minister လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးယဉ် WordPress ကြော်ငြာစီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဂင်နဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တာကိုနောက်ဆုံးတွေ့ပြီ။
Ad-minister အတွက်အင်တာဖေ့စသည်အလိုလိုသိမှုသိပ်မရှိလှသော်လည်း၎င်းအင်္ဂါရပ်များသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ဤတွင်ဖို့ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည် Ad-minister ကို configure လုပ်ပါ၊ စာရေးသူရဲ့ site ကိုကြည့်ပါ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အတွက်
plugin ကိုထည့်သွင်းပြီး activate လုပ်ပါ။
သင့်ဆောင်ပုဒ်တွင်လိုအပ်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုထည့်ပါ။ တည်နေရာအတွက်အထူးဖော်ပြချက်များထားရန်သေချာစေပါ။ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်ဒေသအနည်းငယ်ရှိသည်။
'ထိပ်တန်းနဖူးစည်းစာတမ်း'၊ 'ဖော်ပြချက်' => 'ဤသည်မှာစာမျက်နှာတိုင်း၏ထိပ်ဖျား'၊ 'မပြုမှီ' => '> div id = "banner-top">', 'after' => '> / div> '); do_action ('ကြော်ငြာ - ဝန်ကြီး', $ args); ?>
သင့်ရဲ့ကိုသွားပါ စီမံခန့်ခွဲရန် tab ကိုရွေးချယ်ပါ ကြော်ငြာ.
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ရာထူး / ဝစ်ဂျက်များ သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်းတွင်သင်ထည့်သွင်းထားသောရာထူးများအားလုံးကိုသင်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ကလစ်နှိပ် Now ကို အကြောင်းအရာဖန်တီးပါ။ သင့်ကုဒ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်ပြချင်သောနေရာကိုရွေးပါ၊ သင့်ရဲ့ကြော်ငြာကိုခွဲခြားရန်လုံလောက်သောအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်သေချာပါစေ။
ရက်အပိုင်းအခြားများ၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းအရေအတွက်စသဖြင့်ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အားကောင်းတဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ WordPress ဘလော့ဂ်!
Tags: အချစ်mysql ရှာရန်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဇွဲကျောက်တံတားWalmart
PCAnywhere Bug အတွက်ဖြေရှင်းနည်း
ဇွန် 10, 2008 မှာ 12: 26 pm တွင်
ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ်ငန်းကို စတင်ပြီး အကောင်းဆုံးကြော်ငြာနည်းကို သုတေသနလုပ်နေပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ကိုတွေ့ပြီး အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကြော်ငြာတွေနဲ့ စတင်နိုင်အောင် ကူညီရာမှာ ဒီပရိုဂရမ်ရဲ့ စိတ်ကူးကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို ငါထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရမယ်။ ငါ Glyphius ဟုခေါ်သော အခြား "အကူအညီ" ကြော်ငြာကိုလည်း ရှာဖွေနေပါသလား။ အဲဒါကို ကြားဖူးလား။ မည်သည့် အတွေးအမြင်များကိုမဆို မျှဝေပေးခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်ကို ရှာဖွေရမည့်အရာအတွက် နောက်ထပ် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အကြံဉာဏ်ကို ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။